Home » အသားပေး » NAB Show ကို New York မြို့မှာ Calrec စျေးသစ် Impulse Core
Impulse core ကို AES67 အတူအစွမ်းထက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လမ်းကြောင်းအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး SMPTE 2110 ဆက်သွယ်မှု။ အိုင်ပီကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ, မျက်နှာပြင်များကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့် COTS ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသုံးပြီးစံကွန်ရက်များကျော်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုနောက်မျိုးဆက်အသံဖိုင် (Nga) နှင့် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများဖို့အကူးအပြောင်းလုပ်ရှိသမျှ Calrec ဖောက်သည်ဖွနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းတစ်ခုဆန်းသစ်ခြင်းမရှိဘဲဒါလုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
"ကျနော်တို့က IP အခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခုအလိုလိုသိအဆင့်မြှင့်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်ထောက်ပံ့ဆက်လက်အဖြစ် Impulse core ကို, Calrec ရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစပျိုးနှင့်အတူ aligns တစ်ဦးအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်အရွယ်မှာ DSP ပလက်ဖောင်းက" Dave Letson အရောင်း၏ Calrec ရဲ့ VP ကပြောပါတယ်။ "အိုင်ပီကိုပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာကြောင့်ဒီအကူးအပြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချကြောင့်လက်ရှိနှင့်အသစ်ဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Workflows မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေများအတွက်ချောမွေ့အတွေ့အကြုံကိုစေရန် Calrec ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
Impulse 3D စွဲငြိဖွယ်ရာလမ်းကြောင်းကို width ပေး Nga applications များ, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2 နှင့် 7.1.4 input ကိုလမ်းကြောင်းများအဘို့အားပွတ်ဆွဲ, busses, စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မီတာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအရေးပါသောအပြည့်အဝ NMOS ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပံ့ပိုးသော AoIP Router က, အဖြစ် mDNS / Ravenna ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရှိပါတယ်။ နှစျခု 5U Impulse cores အပြည့်အဝ redundancy များကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝေးလံခေါင်ဖျားရှိနိုင်ပါသည်။
Impulse core ကိုအပြင်, Calrec ပြပွဲမှာယင်း၏အမျိုးအစား R ကို, ချဲ့, IP ကို-based ရေဒီယိုစနစ်ကပြပါလိမ့်မည်။ type R ကိုရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကပဲသုံး slimline ပြားပါဝင်သည်: တစ် fader panel က, ကြီးမားတဲ့အပျော့ panel ကိုနှင့်သေးငယ်တဲ့အပျော့ panel က။ ဘက်ပေါင်းစုံ I / O အရင်းအမြစ်များကိုအတူတစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ 2U core ကိုဖောက်သည်တက်နှင့်ချက်ချင်းအပြေးဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးက single-core DSP အရင်းအမြစ်များကိုအဘယ်သူမျှမခွဲဝေမှုနှင့်အတူသုံးလွတ်လပ်သောရောစပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထိပါဝါနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး AES67 သဟဇာတကွန်ယက်၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူပေါင်းစပ်မျိုးစုံရောစပ်အင်ဂျင်သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ရေဒီယိုရဲ့လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအတူတက်ထားရန်အလုံအလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
တိုးချဲ့ရုပ်သံလိုင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူ Calrec ရဲ့အဆင့်မြှင့် Brio consoles စလည်း NAB နယူးယော့မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်။ နယူးတိုးချဲ့အထုပ် input ကို channel များကို 12 မှ 48 ဆီက input လိုင်းများ 64 မှ 36 ထံမှ Brio64 DSP ရေတွက်ခြင်းနှင့် Brio96 တိုးမြှင့်။ DSP တိုးချဲ့အထုပ်အထက်တွင် v1.1.6 ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ပေါ်မှာရှိသမျှ Brio consoles စများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ၏ ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်အခမဲ့မှာ Brio မှတ်ပုံတင်ရေးအောက်ပါနေကြတယ် www.calrec.com/brioregistration.
Calrec အသံ သီးသန့် On-လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖော်စပ်အသံအတွက်ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။ 50 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်တစ်ဦးကထုတ်လွှင့်အထူးကု, Calrec ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှီခိုဒစ်ဂျစ်တယ် consoles စတဲ့အကွာအဝေးတီထွင်ခဲ့သည်။ ပို. ပို. ။ consoles စချက်နဲ့ Workflows, shareable အရင်းအမြစ်များနှင့်လွယ်ကူစွာချဲ့ထွင်ခံရဖို့စွမ်းရည်မှမြင့်တက်ပေးခြင်း, တစ်ဦးစက်ရုံ-wide network ပေါ်မှာအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ အလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. , Calrec ထုတ်လွှင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများထဲကနေ သာ. ကွီးမွတျတနျဖိုးအရခွင့်ပြုဘူးသောဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးထားသည်။ ပရီမီယံအသံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ထုတ်လွှင့် Calrec အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် calrec.com.
Appear TV Brings Latest X-Series Updates to BroadcastAsia - ဇွန်လ 13, 2019
DPA Microphones Unveils 4097 Choir Mic at InfoComm 2019 - ဇွန်လ 12, 2019
Lucky Finn Productions Uses Indipro Tools to Power Documentaries - ဇွန်လ 10, 2019
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec အသံ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း လှံ & Arrows UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို	2018-10-11
ယခင်: မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း MTS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် Justin ရှင်ပေါလုခန့်အပ်
နောက်တစ်ခု: Arvato စနစ်များRTÉအိုင်ယာလန်မှာကျယ်ပြန့်ထုတ်လွှင့်အသွားအလာ & အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းကိုအနိုင်ရ